Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Seychelles hizara ny fijerin'ny toetrandro amin'ny fanangonana COP
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany
Steen G. Hansen sy ny fanangonana boky momba ny tontolo iainana momba ny toetrandro Seychelles
COP dia hitondra olona manana ny maha izy azy mba hiady hevitra momba izay tokony hatao amin'ny fiovan'ny toetrandro, ary hoy i Steen N. Hansen, atombohy amin'ny fahalalana ny misy, ary avy eo arovy izay hita fa misy. Ny fanoloran-tenan'Andriamatoa Hansen ho an'ny fitantanana ny natiora sy ny natiora dia atosiky ny zava-misy fa ny tontolo manerantany dia iharan'ny tsindry tsy nisy toy izany teo aloha.
Avo izao ny tontolo iainana eo amin'ny fandaharam-potoanan'ny tsirairay satria ny fiovan'ny toetr'andro dia tsapa amin'ny vazan-tany efatra.
Ny Seychelles dia miomana amin'ny fanairana an'izao tontolo izao amin'ny fiarovana ny zavatra notahian'ireo nosy tamin'ny fanantenana ny hanarahan'ny rehetra izany.
Nanoratra taratasy, fomba fijery ary lahatsoratra manasongadina momba ny natiora ary ny fitantanana natiora i Hansen.
Andian-dahatsoratra feno mifototra amin'ny inona Seychelles dia manana harena tsy manam-paharoa amin'ny sehatry ny tontolo iainana dia navoakan'i Steen N. Hansen, teratany holandey monina any Seychelles. Manampy azy ny vadiny Seychellois, Marie France, amin'ny fanentanana ny fanekena ny asa lava sy sarotra ataon'izy ireo.
Hansen dia mizaka ny zom-pirenen'i Danmarka teraka tamin'ny 1951. Tamin'ny 2015 izy nifindra tany Seychelles ary nanambady herintaona taty aoriana tany Seychellois ary nahazo toeram-ponenana maharitra tany amin'ny Repoblikan'i Seychelles tamin'ny 2019.
Hansen dia manana mari-pahaizana momba ny biolojia sy bakalorea amin'ny jeografia ary amin'ny jeolojia koa (avy amin'ny University of Copenhagen) sy amin'ny fiteny sy kolontsaina alemanina (avy amin'ny University of Odense, Danemark). Talohan'ny nahatongavany tany Seychelles, Andriamatoa Hansen dia mpanolotsaina biolojika mpanolotsaina ary mpampianatra zokiolona amin'ny ambaratonga oniversite. Tena liana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izy ary nanoratra taratasy fifanakalozan-kevitra, fomba fijery ary lahatsoratra manasongadina momba ny natiora, ny fitantanana ny natiora, ary na dia ny sakafo fampiasa amin'ny génétique aza.
Tao Seychelles, nanohy ny fitiavany ny fitantanana ny natiora sy ny natiora izy tamin'ny fanoratana ny Flora of the Seychelles voalohany naseho tamin'ny taona 2016 (pejy 725) miampy boky kely kely sy mora vakina manasongadina ireo harena voajanahary ao Seychelles izay azo lazaina Zavamaniry mitokona any amin'ny Nosy Aride (2016); Vallée de Mai - ala an'ala Primeval, Reserve voajanahary ary tranokalan'ny UNESCO (2017); Natiora mahavariana ao amin'ny Nosy Curieuse (2017); Ny zaridaina botanika nasionaly any Seychelles (2018); The Tea Factory, ny Làlan'ny natiora ary Morne Blanc (2018); Le Jardin du Roi Spice Garden (2018); Ivotoeram-pirenena Biodiversité Seychelles (2019); ary farany Le Ravin de Fond Ferdinand - tahiry manokana ao Praslin (2021) izay ifantohany ezaka fitantanana sy fiarovana ny natiora eo akaikin'ny fanolorana zava-maniry sy biby.
Mampatahotra, karazan-javamaniry na biby 3 no manjavona isan'ora manodidina ny ora, noho izany antony izany dia “eo an-tsisinay isika no karazana voalohany afaka nanoratra momba ny famongorana antsika raha tsy misy ny hetsika raisina izao” (Dr. Christiana Pasca Palmer, Executive Executive an'ny biodiversity). Ary ny hany lalan-kivoahana, aorian'ny fanarahana an'Andriamatoa Hansen, dia ny fanentanana ny besinimaro ary amin'izany ny eny ifotony araka izay azo atao amin'ny fahalalana momba ny tontolontsika sarobidy sy ny toedraharaha mitsikera amin'ny alàlan'ny fandinihan-tena, ary ny asan'Andriamatoa Hansen - miaraka ny teniny manokana - dia fandraisana anjara kely sy manetry tena fotsiny.